Isbadalka iyo Sii Socodka Dhaqaalaha Siyaasada Itoobiya – Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD)
Home › Forums › የወጣቶች መድረክ › Isbadalka iyo Sii Socodka Dhaqaalaha Siyaasada Itoobiya
June 15, 2022 at 7:07 am #4185 Reply
“Dhaqaale-yahannadu waa in aanay garanayn oo keliya moodalkooda dhaqaale, laakiin sidoo kale waa in ay fahmaan siyaasadda, danaha, khilaafaadka, xiisaha – nuxurka nolosha wadajirka ah. Muddo kooban waxaad ku samayn kartaa isbedel digreeto; laakiin si ay u sii adkaystaan ​​waa in aad isbahaysi dhistaan ​​oo aad dad isku soo dhawaysaan. Waa inaad noqotaa siyaasi.” (Buscaglia, 2004: 43). Eraygani waxa uu muujinayaa in siyaasadda iyo dhaqaaluhu ay yihiin laba dhinac oo shilimaad ah oo aan midna si buuxda loo fahmi karin iyada oo midda kale ka dhigayso mid la wada leeyahay. Fikirkan siyaasadda iyo dhaqaalaha ayaa horseedaya fikradda dhaqaalaha siyaasadda. Dhaqaalaha siyaasiga ah marka loo eego si fudud waa xidhiidhka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha oo midba kan kale saameeyo iyo lidkeeda.
Xiriirkan waxaa lagu muujiyay dhaqan xumo bulsheed ka Afrika, halkaas oo awoodda siyaasadeed ay inta badan tahay dariiqa loo maro danat gaarka ah ee shakhsi iyo sidoo kale kobcinta macaamiisha oo ah mid abuuraysa su’aal akhlaaqda hoosed ka habdhaqanka. Tan waxaa loo aaneynayaa dabeecadda neopatrimonial ee dhaqaalaha Afrika kaas oo lagu garto shabakadaha macaamiisha ee qaybinta hantida/kheyraadka (Francisco, 2010). Arintan ayaa ah mid aan laga reebaneyn Itoobiya markay ku hoos jirto Isbaheysiga Dimuqraadiga Shacabka Kacaanka ee Itoobiya (EPRDF), iyadoo ay sare u kacday muhiimada ay leedahay dowlad-horumarineed, siyaasiyiintu waxay ku lahaayeen go’aan aan xad lahayn oo ku saabsan qeybsiga hantida (akhri sida kirada ah) iyo sidoo kale ciqaabta.
Imaanshiyaha dib-u-habaynta 2018, waxaa jiray calaamado muujinaya xorriyadda dalka oo dhan. Taas oo ay si weyn u soo dhaweeyeen dadkii rajo ka qabay is bedelka. Si kastaba ha ahaatee, in kasta oo xoraynta, dhibaatooyinka ayaa kor u kacay oo aad mooddo in ay niyad jab ku tahay dadka. Arimahaas oo aan aaminsanahay in ay sabab u yihiin siyaasadaha qallafsan iyo sii socoshada khatarka qaar ee EPRDF taas oo keentay in ay Itoobiya hadda ay naa u dhawaay in ay noqoto dawlad ah ka dib-horumarka. Hase yeeshe, waxaan aaminsanahay inay dib u qaaday dhowr tillaabo oo ay ugu wacan tahay xasillooni-darro gudaha iyo dibadda ah -dagaalka qaybta woqooyi ee Itoobiya iyo dagaalka Ukraine, faafitaanka COVID-19 iyo isbeddelka siyaasadeed ee ay dawladdu ku samaysay xoraynta suuq jilicsan. Waxa loo baahan yahay in dib loogu noqdo hannaankii dawladnimo ee horumarineed, isla markaana wax laga qabto dhibaatooyinka ragaadiyay xisbiga EPRDF iyo hadda xisbiga barwaaqoo (PP) oo ay sabab u tahay khatar ka sii soconeya.
EPRDF iyo Dawladda Horumarinta
Dawlad-horumarineedku waa “dawlad fara-gelisa oo hagta jihada iyo xawaaraha heerka dhaqaale” (Caldentey, 2008; 28). Habkani wuxuu ahaa habkii lagu dhaqmayay marka laga hadlayo dhaqaalaha siyaasadeed ee Itoobiya xilligii EPRDF, halkaas oo uu waday, kuna maamulay dhaqaalaha qaranka (Fantini, 2013). Iyada oo loo marayo dawladda horumarineed, Itoobiya waxay muujisay kobac dhaqaale oo cajiib ah, kobaca wax-soo-saarka ayaa wax yar ka badan 10% tobankii sano ee la soo dhaafay, faqriga ayaa laga dhigay 44% ilaa 30%. Inkasta oo ay sare u kacday, shaqo la’aanta ayaa wax laga qabtay halkaas oo ay hoos uga dhacday 3.5% ilaa 2.3% isla sannadahaas. Si kastaba ha ahaatee kobaca dhaqaale ee noocan ahi waxa uu ku yimid huridda dimuqraadiyadda. Tan waxa lagu sameeyay sugidda horumarka, taas oo keentay in odhaahdii ahayd “horumar ka hor dimuqraadiyadda” lama yaab una noqon.
Waxaa intaa dheer, ku-takri-falka siyaasadda horumarinta iyo ku-takri-falka hantida dadweynaha ee ay ku kaceen shirkadaha dawladda, taasoo keentay in lagu lunsado balaayiin dollar. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah Biyo-xidheenka Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) oo xafladii furitaanka lagu sheegay in uu ku dhamaanayo 7 sano, waxaana lagu aaminay METEC, maadaama ay caan ku ahayd shirkadda Biraha iyo Injineerinka. Dadku waxa ay jeebkooda ku darsadeen lacag, balse 7 sano ka dib markii la bilaabay mashruucaasi waa ay ka fogaatay, in kasta oo ay dawladdu isku dayday in ay qariso, waxa ay dadka ku abuurtay niyad jab iyo cadho. Falalka caynkan oo kale ah ayaa waxaa fulinayey siyaasiyiin ka soo kala jeeda qowmiyado kala duwan oo dalka ah, si kastaba ha ahaatee cadhada dadweynuhu waxay salka ku haysaa qowmiyadda Tigreega maadaama ay hayaan jagooyinka siyaasadeed ee ugu sarreeya. Kuwaas oo ay weheliso shaqo la’aan aad u saraysa ayaa horseeday mudaaharaadyo is daba joog ah oo dalka oo dhan ka bilaabmay 2015 ilaa 2018.
Ka Guuritaanka Dawladda Horumarinta
Mudaaharaadyadan ayaa waxa ay dhaliyeen in Abiy Axmed uu talada dalka la wareego bishii April ee sanadkan 2018. Arrintan ayaa loo arkayay tallaabo aad u weyn oo ay dad badan u qaateen xoraynta dhaqaalaha iyo sidoo kale siyaasadda dalka. Dib u habaynta ayaa kentay isbadalo sida sii deynta maxaabiista siyaasadeed ilayo telecommunications oo noqotay isgaarsiin gaar loo leeyahay. Tallaabadan ay dowladdu qaaday ayaa si weyn loo soo dhaweeyay. Intaa waxaa dheer, falal ay ka mid yihiin qabqabashada madaxdii ganacsiga dadweynaha sida METEC ee Kinfe Dagnew, waxay dadka rajo gelisay in dhab ahaantii ay jirto dabayl isbeddel ah oo ku soo wajahan Itoobiya.
Qorshaha Horumarinta ee Tobanka Sano, waxa lagu qeexay in loo dhaqaaqi doono dhaqaale ku salaysan suuqa oo dhab ah oo xooga la saarayo ganacsiga gaarka loo leeyahay. Tallaabadan loo qaaday dhinaca xoraynta dhaqaalaha iyo ka dhigista mid gaar loo leeyahay ayaa ka dhacaysay isgaadhsiinta telecommunications iyo shirkadda sonkorta. Isla sidaas oo kale ayaa laga yaabaa in laga sheego jawiga maalgashiga ee Itoobiya tan iyo 2018. Dawladdu waxay aad u dhiirigelisay maalgashiga ganacsiga gaarka loo leeyahay si kor loogu qaado kobaca iyo dhimista shaqo la’aanta dalka. Talaabadan ayaa hubaal ah inay dalka u shaqaynaysay maadaama sanad miisaaniyeedka 2020/21 uu dalku soo xareeyay lacag dhan 3.9 bilyan oo dollar taasoo ka badan bilyan sanadkii hore.
In kasta oo isbeddellada noocaas ah ay dawladdu la kulmeyso tijaabadii ugu horreysay ee dhabta ah ee COVID-19 masiibada ah ka dibna iskahorimaadka ay kula jirto Jabhadda Xoraynta Shacabka Tigray (TPLF). Faafida COVID-19 ayaa si ba’an u saamaysay koritaanka xawliga ah laakiin isla markaana jilicsan, dhaqaalaha Itoobiya gaar ahaan magaalooyinka. Warbixin uu soo saaray Baanka Adduunka, ayaa lagu sheegay in 42% ganacsigii ka diiwaan gashanaa Addis Ababa la xidhay, boqolkiiba 8% waxa dalka ka dhacay shaqo la’aan, halka 2% oo kaliya shirkadaha dalka ka jira ay awoodeen in ay shaqaalaysiiyaan. Kuwaas waxaa si gaar ah u dareemay dabaqadda hoose ee dalka oo ku tiirsanayd hab-nololeedka maalinle ah. Waxaa taas ka sii darneed isku dhacee dawladu iyo kooxda TPLF halkaas oo horaantii November uu ka qarxay dagaal aad uga sii daray xaalada dhaqaale. Dagaalka u dhexeeya dawladda iyo kooxda TPLF ayaa u muuqda mid wali sii dhamaanaya, 3 todobaad oo la islahaa “howlgalkii” ayaa hadda qaatay wax ka badan sanad. Colaadda ayaa sababtay burbur weyn oo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ah, wuxuuna ku sii fidsanaday ka badan hal gobol. Arrimahan, oo ay ku sii kordhay dhaqaalaha sii xumaanaya ee sicir bararka, ayaa dhibaato ku haya dadka.
Isbeddel mise Sii socosho?
Wixii ka dambeeyay 2018 waxaa la arkay isbadalo aan la malayn karin 27kii sano ee EPRDF. Furitaanka saaxadda siyaasadda iyo xoraynta dhaqaaluhu waxay ahaayeen fikrado fog-fog oo ay dadka Itoobiya u malaynayeen inaanay iman doonin. Sannadihii ugu horreeyey ee dib-u-habaynta ka dib, rajada dadku aad bay u sarraysay, waxa si weyn loo soo dhaweeyey ka guurista dawladnimada horumarka. Xorayntu waxay u muuqatay mid keenaysa fursado shaqo, hufnaan, sinnaan wax qaybsiga kheyraadka ee dadka iyo inta badan dhammaan horumarka kordhay. Rajadii ayaa sii korodhay markii EPRDF ‘dib u habayn lagu sameeyay’ sidii Xisbiga Barwaaqoo. Dawladdu waxay bilawday mashaariic ay ka mid yihiin mashaariicda ‘qurxinta’ Sheger oo ujeedadeedu tahay shaqo abuurka, xakamaynta isbedelka cimilada iyo soo jiidashada dalxiisayaasha. Dhanka miyiga, dawladda oo ay weheliso deeq-bixiyeyaasha kale ee caalamiga ah waxay ka shaqaynaysaa barnaamijyada badbaadada sida Barnaamijka Safety Net Program (PSNP).
Dad badan ayaa u muuqda in uu dhamaaday waagii ay EPRDF ku haysay talada dalka. Si kastaba ha, ahaatee xaqiiqadu way ka fog tahay waxa la soo bandhigay. Iskusoo wada duub isbadaladaas oo dhan, Hogaanku wuxuu wali la mid yahay kii EPRDF marka laga reebo TPLF. Shaqsiyaadka ka faa’iidaystay taliskii EPRDF ayaa wali ka faa’iidaysanaya nidaamka hadda jira. Shaqo la’aanta ayaa ah arrin weli taagan iyadoo kumannaan arday ah ay sannad walba soo qalin-jabiyaan oo soo galaan suuqa shaqada oo aan weli awood u lahayn inay shaqo helaan. Marka laga soo tago dhismayaal jardiinooyin ah oo laga dhisay magaalooyinka, heerka nolosha ayaa weli ah mid hooseeya, waxaana kor u kacaya qiimihiisu oo sare u kaca. Arrimahaasi waxay ahaayeen kuwo soo jireen ah xitaa xilligii EPRDF. Kuwani waxay muujinayaan in uu jiro isbeddel iyo sii socosho labadaba xilliga dib-u-habaynta 2018 ka dib.
Niyad jab ka ka dhex jira dadka
Dib-u-habaynta dhacday 2018 waxay u muuqataa tobanaan sano ka hor, waddadii horumarka waxay u socotaa jihada ka soo horjeeda. Itobiya hadda waxa ay gashay xaalad ka liidata marka loo eego markii isbadalku dhacay oo ay keenen sababo gudaha iyo dibadaba. Gudaha dalka waxaa ka socda dagaalo sokeeye, waxaana dhibaatooyinka dibadda ka dhashay sida dagaalka Ukraine. Waxaa intaa dheer, faafitaanka COVID-19 wuxuu saameeyay dhaqaalaha dalka. Dhacdooyinkan ayaa waxa ay sare u qaadeen qiimaha maciishada waxaana dadku ay hadda ka xumaadeen kororkaan, halka intooda badan ay yihiin kuwo shaqo la’aan ah oo mararka qaar ay shaqo waayaan. Sicir bararka dalka ayaa bishii March maray 34.7% iyo 43.4% maciishada halka bishii ka horaysayna uu ahaa 33% iyo 41% siday u kala horreeyaan. Sicir bararkaas oo kale dawladdu weli waa inay qaaddo tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu hagaajinayo xaaladaha. Balse jawaabaha ay dowladdu bixisay ayaa ah in la isticmaalo cuntooyinka sida muuska iyo rootiga ama khudaarta la karkariyo. Jawaabahaasi waxay ka cadhaysiiyeen dadweynaha oo si dhab ah u dareemaya sicir-bararka maalinba maalinta ka danbaysa iyadoo sicir-bararkan uu u badan yahay raashinka sida saliidda cuntada.
Isla dadkii xukuumadda ku ammaanay ayaa hadda bilaabay inay ku majaajiloodaan jawaabaha iyo waxqabad la’aanta wax ka beddelka xaaladaha dalka. Kaftanka baraha bulshada lagu soo bandhigay soo jeedinta Ra’iisal Wasaaraha ee ah in muuska lagu cuno rootiga ayaa noqday mid aad loo hadal hayo. Gaar ahaan goobta TikToK oo ay dad badani ku soo bandhigayaan muuqaallo ku saabsan qaababka kala duwan ee loo cuno muuska, iyo xaflad ‘gowraca’ muuska ah oo la xidhiidha ciidaha Easter-ka iyo Ciidul-fidriga ee dhawaantan oo ay caado u ahayd in neef ido ama dibi la qalo.
Si kastaba ha ahaatee xukuumaddu gabi ahaanba kama aanay war-wareegin walaacyadan oo kale oo aan hawl-qabad lahayn, waxa ay isku dayday in ay xasiliso suuqa oo ay wax kala soo degto oo ay beddesho. Tusaale ahaan, si wax looga qabto yaraanta saliidda la quuto waxay dawladdu soo dejisay 150 milyan oo litir oo saliid ah. Ku darsoo, iyadoo ay jirto yaraanta sarreenka oo ka abuurmay dagaalka Ukrain, dawladda Itoobiya waxay isku dayaysaa inay u dhaqaaqdo isku filnaasho sarreen ah. Si kastaba ha ahaatee heerka ay gaadhsiisan karto qancinta shacabka ayaa la iswaydiinayaa maadaama ay Itoobiya leedahay dad aad u badan oo aad u koraya taasoo kordhin doonta baahida.
Xalka Macquulka ah?
In kasta oo dalku uu ku korayo heer togan, tan iyo dib-u-habaynta 2018 dalku waxa uu arkay qiimayntiisii ​​ugu hoosaysay ee la xidhiidha kobaca wax-soo-saarka tobankii sano ee la soo dhaafay iyada oo heerarkoodu hooseeyo 6.1% sanadka 2020. Itoobiya maanta waxa ay isku arkaysaa dhibaato dhaqaale iyada oo ay jirto xiisado siyaasadeed Bil kasta dadku waa inay la tacaalaan sicir bararka sii kordhaya ee ay dawladdu la daalaa dhacayso xalinta. Taasna waxa loo nisbayn karaa isbeddelka iyo sii socoshada ay dawladdu keentay.
Laga bilaabo isbeddelka, xoraynta dhaqaaluhu waa wax la mahadiyo maadaama qaybta gaarka loo leeyahay ay awood u leedahay inay horumariso dhaqaalaha. Si kastaba ha ahaatee arrintani maaha mid ka dhacda dalalka ay ka mid tahay Itoobiya. Dhaqaalaha Itoobiya waxaa ka buuxa suuq-xumo aysan buuxin karin ganacsiga gaarka loo leeyahay maadaama qeybahaas dhaqaaluhu ay leeyihiin khatar sare iyo soo laabasho yar, sida uu ku dooday Ra’iisul Wasaarihii geeriyooday ee Meles Zenawi mar uu ka qeyb galayay dood cilmiyeedka Madasha Dhaqaalaha Adduunka ee 2012. Kaabayaasha dhaqaalaha, sida korontada iyo gaadiidka, oo loo baahan yahay si wax looga bedelo dhaqaalaha waddan ayaa soo kabasho aad u hooseeya ku jira sidaas darteed waxaa ka fogaanaya ganacsiga gaarka loo leeyahay. Tusaale ahaan GERD, marka la dhammeeyo, waxa ay awood u yeelan doontaa in ay bixiso sarifka lacagaha qalaad sida waddanku doonayo in uu dhoofiyo koronto. Intaa waxaa dheer in korontadu sidoo kale loo isticmaali doono ujeedooyinka gudaha ee waaxda wax soo saarka, sidaas darteed iyada oo loo marayo mashruucan iyo mashaariicda kale ee kaabayaasha dawladdu waxay awood u yeelan doontaa in ay wax ka beddesho dhaqaalaha. Laakin hadii ay dawladu ka laabato mashaariicdan kaabayasha dhaqaalaha waa ay adagtahay in wax laga badalo dhaqaalaha Itoobiya. Taasina waxay keentay in dawladdu ay kaalin dhexe ka qaadato isbeddelka dhaqaalaha.
Dhinaca sii socoshada, PP waa EPRDF dib loo baabtiisay iyo qaab dhismeed la mid ah kii EPRDF ku aafeeyay PP. Shaqsiyaadkii ku jiray qaab dhismeedka xisbiga EPRDF ayaa ku jira xisbiga PP, sidaas awgeedna xisbiga talada haya, mabda’ ahaan la mid ah kii hore. Sidaa darteed, shakhsiyaadka noocaas ah lagama fikiri karo inay horumar la yimaadaan, halka ay ka noqon lahaayeen goobo xunxun oo ay ku soo noqnoqon karaan mudaharaadyada iyo isbeddelka maamulka. Sidaa darteed, dawladdu waa in ay isku daydaa in ay wax ka qabato arrintan iyada oo hubinaysa in danta guud ee dadweynaha ay dejiso ajandeyaal horumarineed oo ballaadhan oo ka hadlaya baahiyaha aasaasiga ah ee dadka iyo sidoo kale dhaqaalaha. Si loo wajaho danaha guud waa in dowladdu ay xoogga saartaa sidii ay u maalgelin lahayd mashaariicda daryeelka sida nadaafadda iyo guriyeynta dabaqadda hoose ee bulshada. Intaa waxaa dheer waa in ay sidoo kale diiradda saaraan kaabayaasha aasaasiga ah sida gaadiidka – dhisidda waddooyinka iyo gaadiidka dadweynaha, iyo korontada. Kaabayaashani waxay jiidayaan maalgashiga gudaha iyo dibaddaba, kuwaas oo abuuri lahaa shaqooyin waxna ka qaban lahaa arrinta shaqo la’aanta ilaa heer la maarayn karo.
Reply To: Isbadalka iyo Sii Socodka Dhaqaalaha Siyaasada Itoobiya